Badidekile ngengane (12) ‘ezilengisile’ | Isolezwe
Badidekile ngengane (12) ‘ezilengisile’
Isolezwe / 29 November 2012, 1:06pm / NQOBILE MASIMULA
AKUQONDAKALI ukuzikhunga ngebhande le-gown kuka-Asiphesona Khwetshube (12) waseGlebelands ehostela ISITHOMBE: PATRICK MTOLO
AKENELISEKILE uNksz Ntomb'khona Khwetshube ngesehlakalo sokuzikhunga kwendodakazi yakhe esesithombeni, u-Asiphesona Khwetshube ISITHOMBE: PATRICK MTOLO
Ikhabethe lapho umntwana ezikhunge khona ngentambo wafa e Glebelands.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
LUSEYINDIDA udaba lokuzikhunga ngebhande le-gown lwentombazane eneminyaka engu-12 yasehostela laseGlebelands, eMlazi.
Lesi sehlakalo senzeke ku-Block M kuleli hostela.
U-Asiphesona Khwetshube obedume ngelikaMasandi obefunda u-Grade 5 e-Alipore Primary eseMerebank, utholwe ezikhungile ngendlela engakholakali ngezikhathi zantambama ngoLwesibili.
Ngokusho kukanina kaMasandi, uNksz Ntombikhona Khwetshube, kuyaxaka ukuzikhunga kwendodakazi yakhe njengoba ingatshengisanga lutho obelungenza yenze into enje.
Uthe uzwe esebizwa kuthiwa indodakazi yakhe isizikhungile kwenye indlu yomuntu oyisihlobo somndeni ekuleli hostela ekubeni ibihambe iyodlala futhi isiqedile nokubenzela ukudla nezingane zakubo.
“Ngiphume sengivele ngiphethe ummese njengoba ngitsheliwe ukuthi uzikhungile. Okufike kwangixaka kube wukumfica eguqe ngamadolo nendawo abezikhungele kuyona njengoba kuyindawo emfishane ukuthi sekungaze kufe umuntu uma ezikhunga kuyona,” kusho uNksz Khwetshube obonakala ekhuluma ukuthi akanelisekile ngencazelo yalesi sehlakalo.
Uthe ube esesika ibhande le-gown ukuze akhulule indodakazi yakhe nokuhlule ngisho sebeyithela ngamanzi bezama ukuyiphaphamisa.
Isidumbu sikaMasandi sitholwe siguqe ngamadolo ibhande le-gown ebeliboshelwe esibanjweni sekhabethe lasekamelweni limkhunge emqaleni.
“Ngibe sengibiza omakhelwane nezihlobo nokuyibona abafonele amaphoyisa nawo afike aqinisekisa ukuthi useshonile kodwa emangele ngendawo azikhunge kuyona,” usho kanje.
Uyise kaMasandi, uMnuz Mongezi Msuthu, ofonelwe khona izolo njengoba ebamba amatoho kude nasekhaya uthe baphinde badideka kakhulu ngesikhathi izolo bebonana nodokotela ohlola izidumbu emakhazeni kahulumeni asemgwaqweni uMagwaza Maphalala owawaziwa ngoGale Street.
“Udokotela usitshele ukuthi usesihlolile isidumbu sikaMasandi kodwa akukho okuhlalukayo njengembangela yokufa kwakhe. Uphinde wasichazela ukuthi akaboni ngisho omaka bokuklinywa noma bebhande leli azikhunge ngalo nokuyindida enkulu,” kuchaza uMsuthu.
Uthe babhekene nengwadla njengoba bengazi ukuthi bazothathani bahlanganise nani ukuze bangcwabe indodakazi yabo, nabebefisa ukuyingcwabela eFlagstaff, e-Eastern Cape.
UNksz Khwetshuba uphinde waveza ukuthi indodakazi yakhe ibiyigwala ngendlela eyisimanga nokuxakayo ukuthi ibingasithathaphi isibindi sokuzikhunga.